Tirada dhimashada oo sii kordhaysa kadib duufaanta Hurricane Matthew oo ku dhufatay dalka Haiti - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldTirada dhimashada oo sii kordhaysa kadib duufaanta Hurricane Matthew oo ku dhufatay dalka Haiti
October 8, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Khasaaraha ugu badan ayaa ka dhacay gudaha magaalooyinka iyo tuulooyinka kalluumaysiga. [Sawirka: Reuters]
London-(Puntland Mirror) Tirada dadka ku dhintay duufaanta Hurricane Matthew oo ku dhufatay dalka Haiti ayaa korodhay labo maalmood kadib markii dufaan xun ay halkaas ka dhacday.
Wakaalada wararka Reuters ayaa ku warantay in tirada dhimashada ay gaartay ugu yaraan 572 qof.
Khasaaraha ugu badan ayaa ka dhacay gudaha magaalooyinka iyo tuulooyinka kalluumaysiga ee ku hareeraysan galbeedka cirifka gacanka Tuburon ee koonfurta-galbeed ee Haiti, iyadoo dad badan oo dhintay ay dileen geedaha oo soo dhacay, jajab duulaya iyo wabiga oo fatahaad sameeyay.
Matthew ayaa ah duufaanta ugu culus oo ka dhacda Caribbean tan iyo 2007-dii.
September 27, 2016 Toban ciidamo Turki ah oo lagu dilay labo weerar oo kala duwan oo ay geysteen PKK
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxtooyada Soomaaliya ayaa beenisay wararka sheegaya in dowladda federaalka Soomaaliya ay doonayso in ay badasho mowqifkeeda ku aadan kiiska horyaalla Maxkamadda Caddaaladda Adduunka ee ICJ, sida lagu sheegay war-saxaafadeed kasoo baxay xafiiska warfaafinta [...]